Unyanzvi Hwakanakisisa Kutengesa Yakasarudzika Saizi Yekuyeuka Furo Rekupurudzira Mapiro evakagadziri | Rayson
Rayson Chitubu Mattress Mugadziri akagadza nekuvandudza mhando yekusimbisa mhando iyo inoisa zvigadzirwa zveanoshanda zviratidzo pamberi peindasitiri.
Vatengi vanoda kuziva zvakawanda nezve yedu nyowani chigadzirwa kana kambani yedu, taura nesu chete. Mukufamba kwese kuita, vedu QC nyanzvi dzinozotarisa yega yega maitiro kuona chigadzirwa chigadzirwa. Parizvino, Rayson apfuura iyo yepasi rose mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Zvese zvigadzirwa zvinosanganisira yedu nyowani chigadzirwa inopihwa nehunyanzvi hwekugadzira, hunovimbiswa mhando, uye nemakwikwi mitengo.
Unogona kundibatsira kugadzira dhizaini yedu kana kushandisa logo yangu pane chigadzirwa? Tinogona kuita metiresi zvinoenderana neyako dhizaini kana kupa OEM sevhisi inongoda iwe kuti utipe chigadzirwa chako mifananidzo kana logo mapikicha. 1.Isa makatoni munzvimbo yakati sandara muimba yako yekurara, nyatso dhonza metiresi kunze woisa pamubhedha wako. 2.Chengera nekuchengetera bhegi rekunze nekero uchiva nechokwadi chekuti usacheke ipurasitiki yakaipa mukati kana metiresi, usamhan'arira banga. 3. Bvisa kunze kwemetiresi-yakavharwa pametiresi pamubhedha wako 4Chenjerera cheka bhegi repurasitiki pamwe nekutarisa sezvo machira achangotanga kuparara, Bvisa bhegi repurasitiki. 5. Bvumira maawa makumi maviri nemasere kuti metiresi yako nyowani iwedzere zvizere.Ndinogona kushanyira fekitori yako? Hongu, tinogamuchirwa kuti tishanyire fekitori yedu chero nguva, isu tiri padyo neGuangzhou Baiyun nhandare yenyika, zvinongotora awa imwe nemotokari, uye tinogona kuronga mota kukusimudza.